The Ab Presents Nepal » अरु सरकार भन्दा यसकारण अब्बल छ ओली सरकार
प्रदीप नेपाल – मलाई पनि कतिपय साथी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतै ठान्नुहुन्छ र सगोलमा मलाई पनि गाली गर्नुहुन्छ । म पार्टीको कुनै निकायमा छैन । बैठक कहिल्यै नबस्ने, बेलाबेलामा आमसभा हुने केन्द्रीय समिति रोल नं. २२८ मा मेरो नाम छ रे ! नेपालका राजनीति बुझ्ने सबैलाई थाहा छ, अहिले नेकपा पनि सिद्धान्तहीन पार्टी बनाइएको छ ।
पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो भनेर पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गरेका थियौं । पछि कुन विद्वानले जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद दुवैलाई सिद्धान्त बनाइ दिएछन ।
मैले त थाहापत्तै पाइनँ । ठूलो पार्टी, ठूलै केन्द्रीय कमिटी, निर्णय गर्ने सानो सचिवालय, सबैभन्दा टाउका अध्यक्षद्वय ।मोनुमेण्ट’ (स्मारक) जस्तो पार्टीको स्वरुप देखेपछि संसारमा ‘नयाँ प्रयोग’ को रुपमा स्थापित पार्टीका फेसबुके साथीहरूले लेख्ने गरेका पोस्टबाहेक केही थाहा नपाउने केन्द्रीय सदस्यका रुपमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिचय बोकेर उभिइरहेको छु । अखबारको पुछारमा ‘नेकपाका नेता’ छापिएको कारण पनि यही हुनुपर्छ ।
मेरो निष्कर्षमा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा एउटा ठूलो भीड जुटाइएको छ र १०–१५ जना स्टालिनवादी नेतालाई त्यसको सञ्चालक बनाइएको छ । नीति, नियम, विधि र पद्धति जस्ता शब्द अहिले व्यङ्ग्य भएका छन । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालयका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रेस अक्षरहरूमा टाँसिएका त होलान तर ती कुनै प्रेसको अक्षरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन ।हुन त नेताहरूले यसपाली आफैँलाई खुइल्याउने यो झगडालाई पदको झगडा होइन भन्नुभएछ । राम्रो । त्यसो भए पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेलामा आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बेलामा ‘केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ’ भनेर बखेडा निकाल्ने कामलाई एकतालाई बलियो बनाउने अभियान त भन्न सकिँदैन ।
म पार्टी एकताको बारेमा पहिलो पटक बोल्ने नेकपा (एमाले) को नेता हुँ भनेर पटक पटक लेखेको छु । उतिबेला बोलेको वाक्यको राम्रो सम्झना छ । मैले भनेको थिएँ आदरणीय प्रचण्ड कमरेड, बाबुरामजीले तपाईंलाई छोडेर जानुभयो ।किरण कामरेडले तपाईंलाई छोडेर जानुभयो । एक्लै किन बस्नुहुन्छ ? आउनुस नेकपा (एमाले) मा । तपाईंलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्तो वरिष्ठ नेता बनाउन सक्ने अवस्था अहिले पनि मसँग छ ।